उच्च रक्तचाप | manka kura
« नमोबुद्ध,बलथली पदयात्रा
१)उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिलाई हृदयघात वा हार्ट एट्याक हुनसक्ने संभावना धेरै हुन सक्छ ।
२) नियन्त्रण नभएको उच्च रक्तचाप अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ । मस्तिष्कघात वा स्ट्रेक वा प्यारालाइसिस हुने खतरा पनि त्यत्तिकै हुन्छ ।
३) उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिलाई मृगौला खराव हुने सम्भावना पनि निकै छ । मृगाौला वा किड्नी खराव भयो भने पछि डायलाइसिस गर्नुपर्ने र किडनी फेर्न नै पर्ने हुन सक्छ ।
४) उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिको आंखामा पनि असर पर्न सक्छ ।
५) साधारणतया उच्च रक्तचापको लक्षण थाहा हुंदैन , केहीमा टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने जस्तो लक्षण देखिन सक्ने भए पनि धेरैजसोलाई केही लक्षण भएको पाइदैन ।
६) हाम्रो शरीरको रक्तचाप माथिको ( सिस्टोलिक ) १२० र तलको ( डायस्टोलिक ) ८० भयो भने राम्रो मानिन्छ । तर सवैको रक्तचाप एउटै हुंदैन । तसर्थ माथिको रक्तचाप १०० देखि १२० सम्म भयो भने तलको रक्तचाप ६० देखि ८० छ भने राम्रो मानिन्छ ।
७) माथिको ११० तलको ७० छ भने ठिक छ भन्ने थाहा हुन्छ । वा माथिको १०० तलको ६० छ भने पनि ठिक छ ।
८) माथिको प्रेसर १४० भन्दा माथि भयो र तलको ९० भन्दा माथि भयो भने उच्च रक्तचाप भएको मानिन्छ । माथिल्लो १२० देखि १४० भित्र वा तलको ८० देखि ९० सम्म भयो भनेचाँहि भविष्यमा उच्च रक्तचाप हुने सँभावनाको संकेत हो ।
९) उच्च रक्तचाप एकपटकको मापनले नै निश्चित गर्न मिल्ःदैन । उच्च रक्तचाप हो भन्ने पक्का गर्न कमसेकम ३ पटक भन्दा वढी विभिन्न समय र विभिन्न ठाउंमा रक्तचाप नाप्नु पर्छ । यदि सवै ठाउमा नै माथि १४० र तल ९० भन्दा वढी भयो भनेमात्र उच्च रक्तनाप भन्न मिल्छ । अझ नियमित रक्तचापको मापनसंगै रगतको जाँच,ईसीजी, ईको, पिसावको जाँच गराए पछि मात्र उच्च रक्तचाप भए नभएको भन्नु राम्रो हुन्छ ।
१०) उच्च रक्तचाप भएपछि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधी खानु राम्रो । एक वा दुई चक्की औषधीले कतिपय खतरा टार्न सकिन्छ ।
११) धेरैले औषधी खायो भने जिन्दगीभर खानुपर्छ भन्छन् । जिन्दगी भए त जिन्दगीभर खाने, यदि जिन्दगी नै गयो भने केको जिन्दगी भर ? जिन्दगी जोगाउनै जिन्दगीभर खाने हो । हामी धुलो खान्छौ, धुवाँ खान्छौं , अनावश्यक तेल खान्छौं,अखाद्य वस्तु खान्छौ मतलव गर्दनौ । एक दुई चक्की औषधीखान सोचिरहनु पर्दैन । साइड इफेक्ट भन्दा लाभ धेरै हुने हुनाले लाभकै लागि खाने हो ।
१२) खानै नहुने वस्तु त केही छैन रक्सी चुरोट बाहेक,तर धेरै नुनले रक्तचाप वढाउने भएकोले नुन कम खाने । धेरै गुलियो चिल्लो खानेकुरा नियन्त्रण गर्नु राम्रो । साग सब्जी, फलफूल , फाइबरयुक्त खाना खान जोडदिनु पर्छ । शारीरिक व्यायाम र खानेकुरामा नियन्त्रण यसका लागि ज्यादै राम्रो हो । उच्च रक्तचाप भएकाले नियमित चिकित्सकको परामर्श र नियमित औषधी सेवन र जीवनशैली परिवर्तनमा ध्यान दिनु पर्छ । रक्तचाप सुस्त हत्यारा हो तर बेलैमा पहिचान गरे नियन्त्रण राख्न सकिन्छ ।
डा राजेन्द्र कोजुको सल्लाह सुझाव अनुसार यो टिपोट तैयार पारेको हो । थाहै नदिई ज्यान लिने उच्चरक्तचाप भएका वा हुने लाइनमा वसेका वा नभएकाहरुले यसवाट फाइदा लिनु हुनेछ भन्ने लागेरै यो टांसो राखेको हुं । धन्यवाद ।
This entry was posted on नोभेम्बर 23, 2017 at 6:19 बेलुका and is filed under health.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.